Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Hotels & Ebe ntụrụndụ » Ezumike akpụkpọ ụkwụ akpụkpọ ụkwụ akpụkpọ ụkwụ niile: maka ezinụlọ niile!
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Hotels & Ebe ntụrụndụ • Akụkọ gbasara Jamaica • Akụkọ okomoko • News • Resorts • Tourism • Okwu Nlegharị Anya • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Ndị Turks na Caicos Breaking News • Akụkọ dị iche iche
Ezinụlọ na -enwe obi ụtọ na akpụkpọ ụkwụ!
Ebe ezumike akpụkpọ ụkwụ abụrụla ihe onyonyo nke di na nwunye nwere obi ụtọ na-enwe ezumike ịhụnanya na enweghị nchekasị ebe a na-elekọta ihe niile n'ihi na ọ bụ n'ezie ihe niile. Ma gịnị ma ọ bụrụ na ị bụ ezinụlọ? Na Sandals Beach, a na -anabata ezinụlọ niile!
Oge ezumike Oké osimiri okomoko gụnyere gụnyere ihe niile maka onye ọ bụla.
N'ebe a, enwere egwuregwu ala na mmiri ọ bụla n'okpuru anyanwụ, site na nri oge ọ bụla na-eri nri ruo ụlọ oriri na ọtyụ 21ụ XNUMX pụrụ iche, na mmemme na ihe eji enyere ndụ afọ niile, yana nnukwu ụlọ enyi na enyi.
Nke a bụ ezumike ezinụlọ nwere ọtụtụ ntinye, nhọrọ na ụzọ ndị ọzọ iji na -ekpori ndụ ọnụ.
Na -ewetara onye ọ bụla nso - di na nwunye, ezinụlọ, ezigbo ndị enyi, otu na agbamakwụkwọ
Ebe izu oke zuru oke na-echere na ọdụ ụgbọ mmiri niile dị na Turks & Caicos na Jamaica. Gwuo egwu n'ụsọ osimiri dị ọcha, aja na-acha ọcha kpuchiri. Na -eme ezumike ezinụlọ n'ime ụlọ ndị oké ozu na ime ụlọ. Nwee ọmarịcha ihe omume na -atọ ụtọ ma na -atọ ụtọ maka ụmụaka nke afọ ọ bụla. Ogige ntụrụndụ niile gụnyere osimiri mmiri Pirates Island, agwa Sesame street®, ogige ụmụaka, na ụlọ oriri na ọ excitingụ nightụ na-atọ ụtọ maka ndị na-eto eto. N'ezie, ọdụ ụgbọ mmiri niile dị na Jamaica na ndị Turks & Caicos na-ekwe nkwa ngwugwu ezumike ezinụlọ agaghị echefu echefu n'okpuru anyanwụ Caribbean. Na -eme atụmatụ agbamakwụkwọ? Resorts Resorts na -enye agbamakwụkwọ ebe dị ịtụnanya na ngwugwu ezumike.
Ejila okwu anyị maka ya
Isi mmalite ozi kacha mma dị nyocha onye ọbịa. Gụọ ihe ndị ọbịa a kwuru ihe dị ka otu ọnwa gara aga na TripAdvisor gbasara ezumike ha na ebe ezumike osimiri.
Ndị Turks & Caicos nke osimiri na Providenciales
Oge ezumike Caribbean na ezigbo okomoko agwaetiti - tụtara #2 Caribbean Resort maka Ezinaụlọ site na TripAdvisor
L1279DGkathyf: "Gaa maka ụtọ 16! Ọ dị egwu! Ndị na -ere mmanya na ndị na -eche mmanya, oriri - ihe ịtụnanya niile! Ụlọ oriri na ọ wereụ wereụ ndị magburu onwe ha! Tashana ọkachasị na Neptune dị n'elu na karịa !!!! N'ezie m ga -alaghachi! ”
Oké osimiri Negril na Jamaica
Odikwa na 7-Mile Beach ama ama nke Negril-TripAdvisor hoputara #1 Caribbean Resort maka Ezinaụlọ.
Voyage35019172706: "Anyị na -enwe ọmarịcha ọnụnọ n'ụsọ osimiri. Ime ụlọ anyị mara mma. My tween hụrụ ya n'anya ma mee ọtụtụ ndị enyi. Ricardo lekọtara anyị n'ezie n'ụlọ mmanya na Adrian na nnukwu ọdọ mmiri. Nri ahụ amaka. Anyị ga -alaghachi na paradaịs agwaetiti a. ”
Oke osimiri Ocho Rios na Jamaica
Njem ezumike osimiri n'akụkụ ezinụlọ Jamaica - Hụrụ Top 5 Caribbean Resort maka Ezinaụlọ site na TripAdvisor
kelizabeth_13: "IHE ọ bụla pụrụ iche. Nri, njem mmụta, ụlọ na ndị ọrụ !! N’eziokwu, echere m na ndị ọrụ na -eme oge gị 1000x ka mma. Ha na -enwe omume enyi, na -anabata gị, na n'ozuzu ha na -agba mbọ hụ na a na -elekọta gị. Ndị otu ụlọ ahịa na -amaba mmiri dị ịtụnanya. Glenroy, Oshan, Sherief, Sheldon, Marlon, Ackeem, Triston, & Shan na -atọ ụtọ mgbe niile. Glenroy mere ka imikpu mmiri ọ bụla dị larịị, nwee ọ funụ na nchekwa! Ọ bụ ihe ngosipụta nke njem m. Ịkwọ ụgbọ mmiri n'ime ụgbọ mmiri e ji enyo mee bụkwa ihe a na -aghaghị ime. Enweghị m ike ichere ịde akwụkwọ ọzọ !! 10/10 njem a. ”
Agụnyere ihe niile n'ezie
Na osimiri, a na -etinye ihe ọ bụla echeghị eche. Ọ dịghị mkpa obere akpa ego, naanị tụba nchegbu gị na ikuku ikuku. Akpụkpọ ụkwụ akpụkpọ ụkwụ na-akọwa ihe niile yana itinye ihe a niile:
Talọ oriri na ọuụụ & Ogwe
Ogige Mmiri Mmiri Pirates Island
Egwuregwu Gọlfụ na Ala
Oke osimiri Caribbean kacha mma
Ndụ abalị & ntụrụndụ
Mmanya mmanya Robert Mondavi Twin Oaks®
Agbamakwụkwọ na Ọgbụgba Ọhụrụ
Nyefe Ọdụ ụgbọ elu
Ụtụ Isi Ụlọ Hotels